Ihowuliseyili PLA Bottle e China yoMvelisi kunye noMthengisi | ICopak
Umzi mveliso weShanghai COPAK Co, Ltd ibonelela ngomgangatho wepremiyamu enokutsha UmzA Ibhotile e China. Iibhokisi zethu zeplastiki zeplaza yePlA ziyaziwa ngokubanzi phakathi kwabangenisi kunye nabasasazi kwihlabathi liphela. Ifunyanwa eTshayina kwaye isebenza ngokukodwa kwimveliso kunye nokuthumela ngaphandle iibhotile ze-PLA, iCOPAK inokuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokubonelela ngenkonzo yokurhweba yamanye amazwe. Singabona bathengisi babalaseleyo Ibhotile yePLA etshayina.
Ibhotile yePla yeBhodlela enokuboliswa ziintsholongwane, ebizwa ngokuba yibhotile yeJuice enokuHanjiswa, yakhiwe ngePlastiki yePLA.Ifumaneka ngombala oCwangcisiweyo, ubungakanani, ivolumu kunye noshicilelo lwe logo. Kuzo zonke iiplastikiIibhotile zePLA e China, Le bhotile inobuhlobo kokusingqongileyo, inokuboliswa ziintsholongwane kwaye ayicaci. Iibhotile zePLA zisetyenziselwa ukupakisha iziselo ezifana neziqhamo, ubisi, imifuno, iti, iismothies njalo njalo.
Ibhotile ye-COPAK ye-PLA inezinto ezinobungakanani bokutya, ukucaca okuphezulu, ukuhlala ixesha elide, ukuphinda kuvuze ukuvuza, ukuprinta kwesiko. Sinokukufumana umxholo wakho Iibhotile zePLA e China kunye nokuqinisekisa ulawulo lomgangatho kunye nexabiso lokhuphiswano. Iibhotile zePLA e-china ihlangabezana nemigangatho engqongqo yeephakeji zokutya kwaye ayiqulathanga naziphi na izinto zorhwebo okanye izinto ezinokuphinda zisetyenziswe, ezingenabungozi kwaye zingenancasa, sinokwenza ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.
Uphawu kunye nokusetyenziswa kwibhotile yePlastiki yePlastiki ebolayo
Grade Ukutya: grade ukutya Ukutya Pla. Kukhuselekile kwiiphakeji zokutya kwaye akukho bungozi ebantwini kwezempilo. Zonke iworkshop zethu zikudidi lokutya kwaye akukho uthuli. Imisebenzi yethu iminqwazi kunye neiglavu xa kusenziwa imveliso yeIibhotile zePLA e China.
Eco friendly: I-Biodegrade compostable. Xa iMathiriyeli itshile, akukho livumba kunye nawuphina omnye umoya owenza ungcoliseko lomoya.
Ubungakanani obahlukeneyo: Singakwazi ukufumana iibhotile ze-PLA kwi-China yonke. Siza kunceda ukuthelekisa umgangatho kunye nexabiso phakathi kwabo bonke abathengisiIibhotile zePLA e ChinaUbungakanani bobukhulu kunye neevolumu ziyafumaneka kwiCOPAK.
Ukuprinta ilogo: Uyilo oluqhelekileyo lokushicilela ilogo eyingqayizivele kunye nesitayile yamkelekile. Ukufikelela kwimibala emi-6 kuyaxhaswa. Yindlela elungileyo yokubhengeza uphawu lwakho kunye nokukhuthaza iimveliso zakho.
Egqithileyo Ibhotile yePLA
Okulandelayo: Umenzi wePlaza yeBhola
Eco Iibhotile zeJusi eziMnandi
Iibhotile zePlastiki ezinobuhlobo
Iikomityi zeplastiki ezinobuhlobo
Iikomityi zeEmo Friendly Smoothie
Indawo yesitya sephepha
Umvelisi weNdebe yePLA
Umenzi wePlaza yeBhola
Indebe yePLA China
Iphepha lesaladi isitya